UBlack Coffee ukhumbula ingozi eyamshiya nengalo engasabenzi | News24
UBlack Coffee ukhumbula ingozi eyamshiya nengalo engasabenzi
Johannesburg - UDJ ohlonishwayo kuleli kanye naphesheya kwezilwandle, uBlack Coffee, usefake umbhalo enkundleni yezokuxhuama, u-Instagram ekhumbula usuku abandakanyeka ngalo engozini eyashiya ingalo yakhe yangakwesobunxele ikhubazekile.
OLUNYE UDABA: UHLU OLUPHELELE: Bonke abawine kuma-2017 Grammy Awards
“Umhlaka-11 kuFebhuwari wusuku uNelson Mandela akhululwa ngalo ejele… kuphinde kube wusuku uNkulunkulu anginika isivumelwano esisha empilweni ngemuva kwengozi yemoto eyashintsha impilo yami ngesikhathi ngikhumbula ukukhululwa kwakhe ezitaladini zaseNgangelizwe,” ubhale kanje.
Uqhube wathi esikhathini esingaphambilini lolu suku lalujwayele “ukumsinda”, wathi kodwa manje usekhetha ukulugubha lolu suku.
“Ezinsukwini ezidlule lolu suku lwalujwayele ukusinda kumina… futhi namanje lusenakho ukukwenza lokho kodwa uma ngibheka emuva ukuthi sengihambe ibanga elide kangakanani kusukela lapho ngingabonga kuphela ngokuthi lolu suku lungishintshe kanjani ukuze ngibe yindoda engiyiyona… ngemuva kweminyaka engu-27 ngikhetha ukulugubha lolu suku.”
Zifundele umbhalo kaBlack Coffee ophelele lapha:
A post shared by Black Coffee (@realblackcoffee) on Feb 10, 2017 at 3:16pm PST